Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » IJamaica Igodusa iGolide kunye neSilivere kwiiMbasa zeTravvy
Awards • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel
(lr) uDelano Seiveright, uMcebisi oMkhulu kunye neNgcali yoBuchule, uMphathiswa wezoKhenketho kunye nabaLawuli beBhodi yabaKhenketho eJamaica - uChristopher Wright, uMphathi woPhuhliso lweShishini; UFrancine Carter Henry, uMphathi, abaSebenzi boKhenketho kunye neeNqwelo-moya; kunye noPhillip Rose, uMlawuli weNgingqi, kuMntla-mpuma we-USA, bathatha umzuzwana wesithombe omfutshane ukubonisa iJamaica yeGolide kunye neSilivere iimbasa ezifunyenwe kwi-2021 Travvy Awards ezibanjelwe kwiZiko leNgqungquthela laseMiami Beach ngoLwesine, we-11 kaNovemba.
Ngaphantsi kwenyanga emva kokugqwesa iWorld Travel Awards Caribbean & North America 2021 Winners Day eDubai, United Arab Emirates, iJamaica ifumene amanqaku amakhulu kwakhona ngolwesine, Novemba 11, kwi2021 Travvy Awards eMiami, Florida.
Ilizwe lathatha ikhaya legolide leNdawo eNgqwesileyo yeCaribbean, iNdawo yokuFikela eNgqwesileyo, iBhodi yezoKhenketho eBalaseleyo, kunye neNkqubo yeSifundo seSifundo sezoKhenketho.
IJamaica ikwafumene iimbasa zeSilivere ngeyona ndawo ibalaseleyo yoMtshato weCaribbean kunye neyona ndawo iGqwesileyo yeHoneymoon yeCaribbean.
Iimbasa zeTravvy zonyaka bezibanjelwe kwiZiko leNgqungquthela yaseMiami Beach.
Jameyikha iphumelele igolide kumacandelo eNdawo eNgqwesileyo yeCaribbean, iNdawo yokuFikela eBalaseleyo, iBhodi yezoKhenketho eBalaseleyo, kunye neNkqubo yeSifundo seSifundo sezoKhenketho esiBalaseleyo. IJamaica ikwafumene iimbasa zeSilivere ngeyona ndawo ibalaseleyo yoMtshato weCaribbean kunye neyona ndawo iGqwesileyo yeHoneymoon yeCaribbean.
UMphathiswa wezoKhenketho oHloniphekileyo. U-Edmund Bartlett uvakalise umbulelo wakhe ngokuqaphela kukaTravvy indawo ekusingwa kuyo, esabelana ngokuba “liwonga elikhulu ukuqondwa leli qela libalulekileyo leengcaphephe kushishino.”
“IJamaica iyawamkela la mawonga ngombulelo ongazenzisiyo kunye nokuzithoba. Kufuneka ndibulele iqela elisebenza nzima ngaphakathi Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho, Ibhodi yabakhenkethi yaseJamaica, amanye amaqumrhu karhulumente, kunye nabo sisebenzisana nabo basebenze ngokungadinwayo bekhuthaza uphawu lwaseJamaica kwaye beqhubeka bephucula ukhenketho lwethu. Yimvakalelo emnandi kakhulu ukuqondwa ngexesha lobhubhani, othe wachaphazela kakhulu ishishini lethu lezokhenketho, ”wongeze watsho.
Kumsitho wamabhaso, uSihlalo, weBhodi yabakhenkethi yaseJamaica (JTB), uJohn Lynch; uDelano Seiveright, uMcebisi oMkhulu kunye noMcwangcisi woBuchule, uMphathiswa wezoKhenketho, kunye nabalawuli abavela kwi-JTB – uChristopher Wright, uMphathi woPhuhliso lweShishini; UFrancine Carter Henry, uMphathi, abaSebenzi boKhenketho kunye neeNqwelo-moya; kunye noPhillip Rose, uMlawuli weNgingqi, kuMntla-mpuma we-USA, bamele iJamaica.
Kunyaka ophelileyo, abafundi be-arhente yokuhamba [imeyile ikhuselwe] imagazini kunye ne-TravelPulse.com yenze iivoti ezingaphezu kwe-130,000 kwiindidi ezingaphezu kwe-140 ukumisela abaphumeleleyo kulo nyaka.
Iimbasa zeTravvy zonyaka ezibizwa ngokuba yi "Academy Awards of the Travel Industry" zazibanjelwe kwiZiko leNgqungquthela yaseMiami Beach ukuhlonipha iifemu zokuhamba, iimveliso zokuhamba, ii-arhente zokuhamba, kunye neendawo zokuya kwimpumelelo yazo ephawulekayo.